नेकपाको जनसभा : कहाँबाट आए हजारौं मान्छे ? – Lokpati.com
सरकार नेपाली काँग्रेस केपी शर्मा ओली आजको नेकपा मृत्यु राशिफल चितवन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका नेपाल प्रहरी प्रधानमन्त्री पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रचण्ड
By लोकपाटी अनलाइन Last updated Nov 25, 2018
काठमाडौं, ८ मङ्सिर । धेरैले सोचेका थिए, ‘नेत्रविक्रम चन्द विप्लव ‘नेतृत्व’को नेकपाले काठमाडौंमा सामान्य कार्यक्रम गर्छ र पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउँछ । तर, जतिबेला नेकपाको जनसभा सुरु भयो, त्यतिबेला मानिसहरुका अनुमान ‘फेल’ खाइसकेको थियो ।
विप्लव माओवादीले शनिबार देशका सबै जिल्लाहरुबाट काठमाडौंमा मान्छे उतार्यो । भर्खरै आफ्ना प्रवक्तालाई गिरफ्तार गरेर देशभरि डुलाएर अपमान गरेको आक्रोश थियो कार्यकर्तामा । सर्वोच्चले पटकपटक छोड्न आदेश दिँदा पनि सरकारले कानमा तेल हाल्यो, यसले सरकार निरङ्कुश छ भन्न विप्लव माओवादीका लागि शक्तिशाली हतियार मिल्यो ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित जनसभामा विप्लव माओवादीले हजारौं मान्छे उतारेको छ । सडक जाम गरी गरिएको जनसभामा ठेलम्ठेल मानिस मात्र थिएनन्, सडक पनि जाम थियो । राता टिसर्ट लगाएका युवाहरुको ताँती देख्दा २०६२/०६३ कै माओवादीको झझल्को मिल्थ्यो ।
जनसभामा पार्टी महासचिव विप्लव अनुपस्थित थिए । पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा थिए प्रमूख अतिथि । तर, मान्छेहरुको उपस्थिति भने अर्थपूर्ण थियो । जनसभाको उपस्थिति हेर्दा लाग्थ्यो, ‘यी विप्लव हेर्न वा उनको भाषण सुन्न आएका मान्छे थिएनन् । बरु, नेकपा अर्थात् विप्लव माओवादीको नीतिप्रति सहमत भएका मान्छेहरुको भेला थियो त्यो ।’
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएको छ । ओली इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनकै विरोधका लागि सडकमा जम्मा भएका मानिसहरु देख्दा ‘नेकपाको विकल्प नेकपा’ त होइन ? भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ मिल्थ्यो । कम्युनिष्टहरुको सरकार रहेको परिस्थितिमा विद्रोही शक्तिप्रतिको यो आकर्षण अवमूल्यन गर्ने खालको थिएन ।
सत्तामा पुगेपछि प्रायः पार्टी र नेताले आफ्नो धरातल बिर्सन्छन् । अहिले त्यस्तै भएको छ सत्ताधारी नेकपा । एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकता भए पनि तलसम्म संगठनात्मक एकता हुन सकेको छैन । सरकार र पार्टी दुवैतिर भद्रगोलको ‘ताप’ छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन, विवादका बीच सरकारले गुजारा चलाइरहेको छ । त्यसको भरपूर फाइदा उठाउँदैछ विद्रोही नेकपा ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै कार्यकर्ताको क्रान्तिकारी उर्जा शिथिल हुँदै गयो । ‘पहुँचवाला’ नेताहरु राजधानी र शहर केन्द्रित हुँदै गए । नेताहरु चुनावका बेलामात्रै दुरदराज पुग्थे । बाँकी साँढे चार वर्ष ग्रामीण बस्तीको ‘एक्लो सिंह’ भयो विप्लव माओवादी । प्रचण्ड–बाबुरामप्रतिको असन्तुष्टिको राम्रै फाइदा उठाए उनीहरु । टोल–टोलमा प्रशिक्षण राखे, संगठन बनाए, जुन कुराको हेक्का राख्ने फुर्सद सत्ताधारी नेकपामा भएन ।
विप्लव माओवादीले सत्तारुढ दलविरुद्ध आगो ओकल्न सिकायो । विप्लवको ‘महापतन’ पुस्तक त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त थियो । उनीहरुले आम्दानीका अवैध स्रोतहरुमाथि कब्जा जमाए । ‘क्रान्ति पनि स्रोत पनि’ । यो सुत्रले एकथरि युवाहरु विप्लव माओवादीको नजिक भए, जसलाई नेकपा राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेको छ ।
अहिलेको राजनीतिक सङ्घर्ष सत्ता वरिपरि घुमिरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारीकै भुलभुलैयामा छ देश । तर, सडकको मोर्चामा एउटा सशक्त शक्ति जन्मिँदैछ भन्ने हेक्का धेरै नेताहरुलाई छैन । सरकारले विप्लवले उठाएका राजनीतिक एजेण्डाको मूल्य नबुझ्दा, उसले संगठित गरेको शक्ति नचिन्दा त्यसको फाइदा उठाउँदैछ विद्रोही नेकपा ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जतिबेला एकताको निर्णय भयो, त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका एकथरि कार्यकर्ता एकताप्रति खासै उत्साही देखिएनन् । एमालेसँगको विगतमा गरिएका राजनीतिक सङ्घर्षको ‘तुस’ले उनीहरु भावनात्मक रुपमा विप्लवसँग नजिकिए । शनिबारको सभामा त्यसको प्रष्टै सङ्केत देखिन्थ्यो ।
सत्ताधारी नेकपा र सरकारको गियर बदलिएन भने त्यसको फाइदा उठाउने ३ शक्ति छन्, ती हुन्, नेपाली कांग्रेस, विप्लव माओवादी र राजावादी शक्ति । त्यस्तो अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाभित्रै विकल्प खोज्नेहरुको साथ कांग्रेसले पाउनेछ । राजाकै शक्ति फर्काउन चाहनेहरु स्वाभाविकै रुपमा पूर्वराजा रोज्नेछन्, अनि संसदीय राजनीतिको विकल्प खोज्नेहरु विप्लवनजिक । त्यही परिस्थितिको खोजीमा देखिन्छ विद्रोही नेकपा ।
शनिबार टुंडीखेलका सडकमा जम्मा भएको शक्तिले राज्यसत्ता बदल्ने ‘ल्याकत’ राख्दैन । तर, राज्यलाई चुनौति दिने र अल्मलाउने ‘ल्याकत’ राख्छ । यो यथार्थतालाई सरकारले कसरी बुझ्छ ? त्यसैमा विद्रोही नेकपाको भविष्य अन्तर्निहित छ । सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधिलाई सुरक्षा चुनौति होइन, राजनीतिक चुनौति देख्न सक्नुपर्छ ।
अहिले नै जनता अर्को क्रान्तिका लागि तयार छैनन् । विज्ञान प्रविधिको युगमा विप्लवको ‘एकीकृत क्रान्ति’ले जादु गर्दैन । तर, राज्य भाँडमा जान सानै शक्ति काफी हुन्छ । यतातिर सरकारले कहिले सोच्छ ? जनअपेक्षातिर आफूलाई कहिले ढाल्छ ? उल्टो दिशातिर कुदिरहेको सरकारी गाडी ‘युटर्न’ गरेर कहिले गियर बदल्छ ? त्यो भने प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।
जनसभानेत्रविक्रम चन्दनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
शिक्षामन्त्रीका निजी सचिव न्यौपानेले गरे ट्युमर रोगीलाई सहयोग
‘काँग्रेसले सरकार असफल भयो भन्नुमा कुनै तुक छैन’ : मन्त्री पण्डित
‘संविधान दिवसको दिपावलीलाई तहसनहस पार्छौं’
पोर्चुगलमा के गर्दै छन् काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा ?
प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किए
संघीयता जतिसक्दो छिटो खारेज गरौं